Nhyehyɛeɛ A Ɛbɛma Ahafo Mfaso - Deɛ Apam No Aba Mu: Yɛrehwehwɛ Mpɔtamu Ahofama Wɔ Newmont Sika Kɔkɔɔ Agudeɛtuo Mu Wɔ Ghana | Academic Commons
Nhyehyɛeɛ A Ɛbɛma Ahafo Mfaso - Deɛ Apam No Aba Mu: Yɛrehwehwɛ Mpɔtamu Ahofama Wɔ Newmont Sika Kɔkɔɔ Agudeɛtuo Mu Wɔ Ghana
Wɔ afe mpennu ne nnwɔtwe mu no, mpɔtam du a ɛwɔ Bono ne Ahafo mantam mu ne sika kɔkɔɔ adwu-makuo bi a yɛfrɛ no Newmont Ghana Gold Ltd (Newmont Ghana) yɛɛ apam. Ansa na wɔrebɛyɛ apam no, na saa adwumakuo yi afiri aseɛ koraa retu sika kɔkɔɔ wɔ saa mpɔtamu hɔ. Deɛ na ɛwɔ apam no mu bi ne sɛ, adwumakuo no hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛbuebue nnwuma wɔ mmeaeɛ a wɔretu sika kɔkɔɔ no na ɔsane de sika bɛboa mpuntu nnwuma a ɛbɛkɔ so wɔ mpɔtamu hɔ. Wɔ apam no mu no, wɔkɔɔ bɛnkrom wɔ nhyehyɛeɛ pa a ɛbɛboa ama nkitahodie akɔ so wɔ mpɔtamu hɔ ne adwumakuo no ntam na aboa ama wɔasi gyinaeɛ. Mfeɛ du akyi, saa amannebɔ yi rehwɛ suahunu a mpɔtamhɔfoɔ no anya afiri saa apam no mu na asane nso akyerɛ sɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ no yie. Wɔkaa apam no ho asɛm bio wɔ afe mpennu ne du-nnan mu na ɛbɛtumi aba sɛ wɔbɛsane aka ho asɛm bio wɔ afe mpennu ne du-nwɔtwe anaa afe mpennu ne du-nkron mu.
Wɔ wiase afanan nyinaa mu no, fagudeɛtuo nwumakuo ne mpɔtamu a wɔdi wɔn dwuma no tɔ kɔ so ara kɔ apam. Wɔ aman bi so no, amammara no hwehwɛ apam a ɛfa mfaso-kyɛ ho ansa na wɔama kwan ama fagudeɛtuo adwumakuo no ahyɛ wɔn dwumadie ase. Wɔ aman foforɔ so no, nwumakuo no ara firi wɔn pɛ mu na ɛkɔ apam no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpɔtamhɔfoɔ no bɛyɛ adwumakuo no atuu na wakwati ntawatwa biara a ɛbɛma ne ho so afiri mpɔtamu hɔ. Mpɔtamhɔfoɔ bɛtumi de apam no asi wɔn asɛdeɛ so dua, de anya banbɔ bi afiri nsunsuansoɔ bɔne a fagudeɛtuo de ba ho na ama wɔn anya kyɛfa wɔ mfasoɔ a ɛbɛfiri dwumadie no mu aba. Wɔ Ghanaman mu no, mmara biara nni hɔ a ɛhyɛ fagudeɛ nnwumakuo bi sɛ wɔne mpɔtamu a wɔredi wɔn dwuma no nyɛ apam anaa nhyehyɛeɛ bi.
Mpɔtamhɔfoɔ no ne yɛn dii nkitaho a wɔsrɛɛ yɛn sɛ, yɛntu wɔn fo wɔ apam no dwumadie ho. Ansa na yɛregye ato mu sɛ yɛbɛdi saa dwuma no, yɛtuu anammɔn kɔɔ mmeaeɛ no a wɔretu fagudeɛ no ne Nkran. Wɔn a wɔka bi a ɛwom a yɛne wɔn kasaeɛ no bi ne Ghana aban fagudeɛ badwakuo a wɔfrɛ wɔn “Ghana’s Minerals Commision”, mpaninfoɔ a wɔwɔ fagudeɛ nsase no so, ahɔhoɔ a wɔte mpɔtamu hɔ no, nnwuma-kuo a ɛnhyɛ aban ase a wɔwɔ mpɔtamu hɔ, nnipa a apam no ayi wɔn sɛ wɔnhwɛ sɛ nhyehyɛeɛ no bɛyɛ adwuma ne ahenfo nyinaa foaa dwumadie yi so.
Yɛsane kɔɔ beaeɛ a wɔretu fagudeɛ no ne Nkran wɔ Kɔtɔnimaa bosome mu wɔ afe mpenu ne du-nson mu. Ɛhɔ na yɛtotoo nnipa bɛboro ɔha ano a na wɔn a wɔka ho bi ne nananom ahenfo, wɔn a wɔsi aban anan mu wɔ mpɔtamu hɔ, mpɔtamhɔfoɔ ananmusifoɔ, temanmufoɔ ne nwumakuo a ɛnhyɛ aban ase, akuafoɔ, mmabunu ne nnipa a apam no ayi wɔn sɛ wɔnhwɛ sɛ nhyehyɛeɛ no bɛyɛ adwuma. Afei yɛsane ne Newmont ananmusifoɔ ahodoɔ dii nkitaho. Yɛntumi nka sɛ nhyehyɛeɛ a mpɔtamhɔfoɔ ne adwumakuo yi yɛeɛ no ama mpuntuo aba wɔn abrabɔ mu ɛfiri sɛ yɛannya nsɛm pii a ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi de Ahafo nkuro yi atoto nkuro ahodoɔ a wɔtu fagudeɛ yi bi wɔ hɔ nanso wɔannyɛ nhyehyɛeɛ biara ammfa wɔn dwumadie no ho. Nanso, yɛrema yɛn nsusuiɛ ne deɛ yɛahunu a ɛbɛtumi aboa ama apam nhyehyɛeɛ no ayɛ adwuma yie daakye na ɛho aba mfasoɔ ama mpɔtamhɔfoɔ no, aban ne Newmont adwumakuo no.
Ahafo.community.agreement.2018.Twi_.summary.pdf application/pdf 367 KB Download File
Twi translation of the executive summary of the report "Implementing the Ahafo Benefit Agreements: Seeking Meaningful Community Participation at Newmont’s Ahafo Gold Mine in Ghana."